ग्ल्यामर नभएका गायिका पछि पर्छन् – Sourya Online
ग्ल्यामर नभएका गायिका पछि पर्छन्
सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १४ गते १:४८ मा प्रकाशित
काठमाडौं : दुर्गा खरेल अहिले चलेका गायिकामध्येकी एक हुन् । पछिल्लो समय पाश्र्वगायन होस् या कलेक्सन एल्बम, चारैतिर उनी छाएकी छन् । ०६२ मा सुरु भएको उनको गायनमा प्रतिभा खोज्ने रियालिटी सो नेपाली तारामा सहभागीका रूपमा उनी टप ६ सम्म आउन सफलसमेत भइन् । त्यसपछि राजु सिंहको संगीत र कालीप्रसाद रिजालको शब्द रहेको ‘घरमा पनि एक्लै वनमा पनि एक्लै…’ बोलको गीतबाट खरेलले गायनको औपचारिक रूपमा सुरुआत गरेकी हुन् ।
सफल गायिका बन्ने उद्देश्यले ०५९ मा गाउँबाट काठमाडौं छिरेकी खरेल गायनमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्थिन् । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि उनले अनुराग संगीत विद्यालयमा छ वर्षको सांगीतिक कोर्ससमेत गरेकी छन् । दुई सयभन्दा माथि संख्याका फुटकर गीतमा समेत स्वर भरेकी खरेलको पहिलो सोलो एल्बम भने दिल हो, जुन उनले ०६६ मा बजारमा ल्याएकी थिइन् । विशेषत: सबै प्रकारका गीतसंगीतलाई स्वरले सिँगार्दै आएकी उनी आफूलाई भर्सटाइल गायक भनाउन सबै प्रकारका गीतमा आवाज दिएको बताउँछिन् छु ।
पछिल्लो समय गायिकाहरू पनि ग्ल्यामरमा निकै आगाडि देखिन थालका छन् । तीमध्येकी एक पनि हुन् खरेल । उनका पहिन होस् या हाउभाउ कुनै चलेका मोडका भन्दाकम देख्न पाइन्न । नाम लिस्ट नै तयार गर्ने हो भने खरेल पनि अग्रपंक्तिमा आउँछिन् । के गायिकाहरू पछिल्लो समय स्वरभन्दा ग्ल्यामरमा बढी जोड दिन थालेका हुन् ? गायिकामा स्वर भएर मात्र पुग्दैन आर्कषण चाहिन्छ । खरेलले भनिन्, अचेल एल्बमभन्दा पनि गायकगायिकाको बाँच्ने आधार भनेको स्टेज कार्यक्रम हो । स्वरका साथै स्टेजमा पनि आफूलाई जति आकर्षक देखाउन सक्यो, त्यति नै यस्ता कार्यक्रममा बिक्न सकिन्छ । अचेल ग्ल्यामर पछाडि रहेका गायिका स्वर भए पनि पछि पर्ने अवस्था रहेको उनले खुलाइन् । त्यसो त गायिका खरेल आफ्नै एल्बमकै गीतका म्युजिक भिडियोमा पनि आफैँले मोडलिङ गर्ने गरेकी पनि छिन् । एक त मोडको खर्च पनि बचत हुने, अर्काे स्रोताले गायिका चिन्ने अवसर प्राप्त मोडलिङ गर्दाको दोहोरो फाइदा उनले सुनाइन् ।
गायनमा लागेर आफूले गुमाउनुभन्दा पनि धेरै पाएको बताउने यी गायिकाको जोवनमा पनि भर्खर बैँस फक्रिएको छ । त्यसैले अचेल उनको ध्यान विवाहतिर पनि रहन्छ होला नि ? प्रश्न चुहाउन नपाउँदै उतर फर्काइन्, ‘अहिले लगन जुरेको जस्तो लागेको छैन । जहिले जुर्छ, त्यहिले अलमल केही नगरी विवाह गर्छु । त्यसो त उनका मनमा अचेल आफ्ना लागि वरको चाहना नभएको भने होइन । ह्यानसम, माया गर्न जान्ने र आफ्नो म्युजिकल फिल्डभन्दा बाहिरका केटाको खोजीमा छु,’ उनले आफ्नो मनमा रहेको वरप्रतिको चाहना ओकलिन् ।
हाफ फ्रक र वान पिसमा आफू सबैभन्दा धेरै सेक्सी देखिने बताउने खरेल आफ्नै शरीरका प्राय: सबै अंग राम्रो लाग्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, तीमध्ये पनि मेरो आँखा सबैभन्दा विशेष छ । यसले सबैलाई लोभ्याउँछ । सेक्सप्रति नर्मल सोचाइकी यी गायिकाले सेक्सलाई जीवन चलाउने र सन्तान उत्पादन गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा हेर्ने गरेकी छन् । विवाहपछाडिकै सेक्स उचित हुने उनको धारणा छ । तर, विवाहअगाडि उनलाई सेक्स प्रस्तावै आएका छैनन् त ? फ्यानबाट सेक्सका प्रस्ताव आउने गरेका छन् । उनले भनिन्, ‘यस्ता प्रस्ताव राख्ने फ्यानलाई विवाह जोसँग हुन्छ, त्यही सँगमात्र सेक्स सम्बन्ध राख्छु भन्ने जवाफ फर्काउँदै आएकी छु ।
‘देशमा राम्रो नीतिनियम भइदिएको भए कलाकार आर्थिक रूपमा मर्ने थिएनन्’ उनले भनिन्, ‘अहिले राम्रा र दक्ष कलाकारले शिर ठाडो बनाएर बाँच्नसक्ने अवस्था छैन ।’ अहिलेसम्म गीत/संगीतकै सहयोगले जीविकोपार्जन चलेको बताउने उनीे गीत/संगीतको क्षेत्रमा बेइमानी बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय त्यो अवस्था नरहेको बताउँछिन् । कलाकार पलायन हुनुमा राज्यको संरक्षण नीतिको अभाव भएको बताउने यी गायिकाको पछिल्लो समय यसक्षेत्रमा केही असन्तुष्टि बढेको छ । (सौस)